Ra'iisul Wasaare Boris Johnson oo maanta laga sugayo go'aan adag
Maanta oo Talaada ah ayey dadweynuha Britain dhagaha u wada taagayaan xanibaadyo dheeri ah oo mar labaad loo soo rago sababo la xiriira tirada sii kordhaysa ee kiisaska xanuunka Covid-19 ee dalka Britain.
Boris Johnson waxaa uu ka baaraan-dagayaa haddii uu go’aan adag qaadan doono maalmaha soo socda, kuwaas oo lagu adkaynayo talaabo kasta oo lagula dagaalamayo in uu fayraskani uu sii laba kacleeyo mar labaad.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa lagu wadaa in taleefishinka kala hadlo bulshada Britain si u sharaxo sharciyada cusub maalin uun kadib markii la taliyayaasha sar sare ee caafimaadku ay sheegeen in bartamaha October uu cudurku maalin walba ku dhici doono 50,000 oo qof isla markaana ay u dhiman karaan 200 oo qof maalin walba, haddii sida xaalku hadda yahay aysan waxba iska badalin.
Isla maanta oo talaada ah Boris Johnson ma howlyara oo waxaa uu shir-gudoomin doonaa kulanka gaarka ah ee amniga diiradda lagu saaro ee loo yaqaano Cobra isaga oo ay wehelinayaan xubnaha gollohiisa Wasiiradda.
Waxay qayb ka tahay maalin mashquul ah RW, inta lagu gudajiray sidoo kale wuxuu shir gudoomin doonaa shirarka guddiga xaaladaha degdegga ah ee Xukuumadda iyo Golihiisa Wasiirada.
Boris Johnson ayaa lagu wadaa oo ay suuragal tahay in marka hore uu la hadli doono mudanayaasha baarlamanka, kadibna fiidkii ayuu waxa uu ka sheego baarlamanka la wadaagi doonaa dadweynaha.